Monsoon ICT Exhibition - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Events > Monsoon ICT Exhibition
Monsoon ICT Exhibition
Date : 19~21 August 2011
Location : Tamadaw Hall
Acer Notebook ဝယ်ယူသူတိုင်း Acer ရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်များကို အနည်းဆုံး (6)မျိုးရှိပါမည်။ ( Acer Bag, Trend Micro Antivirus (1 Year License),Power Logic Optical Mouse, LCD Cleaing, Keypad Protector, Notepad, keychain)
Monsoon Fair ရဲ့ 100 Happy People Program အနေနဲ့ ပြပွဲရဲ့ ပထမဆုံးနေ့(19-August-2011)တွင် နံနက်-၁၀ နာရီမှ စတင်၍ ပထမဆုံးလာရောက် ဝယ်ယူသူ Customer (၁၀၀ ) အား Amazing Price (310,000)ကျပ် ဖြင့် Acer Aspire 4750Z အား တစ်ဦးလျှင် တစ်လုံးသာ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ရောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
16 ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည့် NetGuide ပါရှိသော ကူပွန်ဖြင့်ဝယ်ယူပါက Aspire 4750G(i7) Notebook နှင့် New Arrival Predator ASG3610 Desktop ကို ငွေကျပ်-10,000/- Discount ထပ်မံ့လျှော့ချပြီး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်..
15 ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည့် ITIZEN ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသော ကူပွန်ဖြင့် ဝယ်ယူပါက Apacer Memory Stick –4GB ကို 4000/- ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး 4738G(i3) ကို ငွေကျပ်-10,000/- Discount ထပ်မံ့လျှော့ချပြီး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်..
19 ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိမည့် 7Days Shopping Guide ရှိ ဆိုင်မိတ်ဆက် စာရွက်နှင့် လာရောက်ဝယ်ယူပါက Aspire 4750(i3) ကို ငွေကျပ်-10,000/- Discount ထပ်မံ့လျှော့ချပြီး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်..
Acer Myanmar Fun Club (offline) member ဝင်များ member card နှင့်တကွ လာရောက်ပါ Acer ရဲ့ အမှတ်တရ Optical Mouse ကို လက်ဆောင်လာရောက်နိုင်ပါသည်။ AMFC(offline) member ဝင်ရောက်လိုသူများလည်း Form ဖြည့်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Steelseries Product Launching 2019
Event Name: WIN THE GAME WITH...
Yangon ICT Fair September 2019
Event Name : Yangon ICT Fair...
15th ICT EXHIBITION 2019
Event Name : 15th ICT Exhibition...
Location : Junction City, Yangon. Date...
Upgrade Your Daily Office Lifestyles
Date : 30th Nov 2018 (8:30...
Predator Special Slaes
“Projector Big Sales” ပရိုမိုးရှငျး
GT – Titan, GS – Stealth, GE – Raider နဲ့ GP – Leopard Series တှအေကုနျလုံးကို 50USD Cashback ပေးထားပွီးတော့